अख्तियार प्रमुखका बारेमा संसद्मा छलफल – ABC KHABAR
October 18, 2016 ABC Khabar समाचार
काठमाडौं, २ कात्तिक । व्यवस्थापिका संसद्को बैठमा अहिले नेपाली लोकमा नभएको अख्तियारका प्रमुख लोकमान कार्कीको बारेमा अधिकांस सांसदहरुले विषय उठान गरेका छन् । सोमबार दोस्रोपटक सर्वोच्चका म्याद तामेलि गर्न गएका टोलिलाई हुलहुज्जतका गरि फर्काइएपछि यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको हो । सांसदहरुले अदालतको आदेश तामेली गर्न समेत नदिइनु न्यायिक सर्बोच्चतालाई चुनौति भएकोे यसबारे जनप्रतिनिधि मौन बस्न नसक्ने बताएका छन् ।
संविधानले दिएको विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति विशेषले संविधान, कानुनकै खिल्ली उडाउँदा पनि हामी सांसद र संसद टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? उनीहरुको प्रश्न थियो । संसदको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘अदालतको आदेशको खुलामखुला अवज्ञा भएको छ, कानुनी राज्यको उपहार भएको छ ।’
दुःखका बेला संसदमा भएका धेरै शक्तिशाली नेतालाई अदालतले न्याय दिएको स्मरण गराउँदै वरिष्ठ अभिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले भने, आज अदालत जुन चौवाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिड्न प्रयत्नरत छ, यति बेला अदालतलाई टेवा दिने कि नदिने ?’
अदालतल र अख्तियार प्रमुखबीचको झञ्झट भनेर आँखा चिम्लन नमिल्ने उनले बताए । सर्वोच्चले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु नसक्नु भनेको यसले भविश्यप्रति राम्रो संकेत गर्दैन’ उनले संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, त्यसमाथि संवैधानिक ओहदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु गराउनु भनेको अझै आपत्तिजनक विषय गठन गर्नु पर्ने हो ।’ संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने बाहेक अरु अवस्थामा पदबाट हटाउन नमिल्ने भन्दै उनले भने, संविधानले दिएको विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति विशेषले संविधान, कानुनकै खिल्ली उडाउँदा पनि हामी सांसद र संसद टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ?
उनले अख्तियार प्रमुख कार्की कुन कामले, कति अवधिकमा लागि विदेश गएको र कहिलेसम्म र्फकने हो संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । ‘संसदमा सरकारले अख्तियार प्रमुखको बारेमा जानकारी गराओस् । उनी के कामको लागि गएका हुन् ? यति लामो समय विदेशमा बस्ने प्रयोजन के हो ?’ उनले भने । संसद्मा बोल्दै अधिकारीले हालसम्म संसदले महाअभियोग समिति गठन गर्न नसक्नुको कारण प्रश्ट पार्न सभामुखसँग माग राखेका छन् ।
यस्तै विशेष समयमै बोल्दै एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले अदालतको म्याद तामेली गर्न गएका अदालतका कर्मचारीलाई हुलहुज्जतको शैलीमा अवरोध गर्नु न्यायिक सर्बोच्चको अपमान भएको बताएका छन् । उनले सादा पोशाकका प्रहरी समेत परिचालन गरेर अदालतको म्याद तामेल हुन नदिनुले राज्य नै गुण्डागर्दीमा उत्रिएको आरोप लगाए । यसका बारेमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग रहेको थियो ।
थरुहट पार्टीकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले लोकमान सिंहको घरमा म्याद तामेली गर्न नसक्नु लज्जास्पद हो भन्दै उनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई समेत कठघरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘लोकमानसिंह कुन लोकको यमराज हुन् ? हाम्रो देशको कानुन कति लाचार छ ? लोकमानलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल नै हुन् । लोकमानको बचाउ गर्नेलाई देश निकाला गर्नुपर्छ र लोकमानलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।’
कलाकार मनोजको नयाँगीत (भिडियो सहित)